Real Madrid oo CABSI ku Qabta Kooxaha wata Midabka Maaliyada Barcelona kaddib Qasaaradii Eibar – Gool FM
Real Madrid oo CABSI ku Qabta Kooxaha wata Midabka Maaliyada Barcelona kaddib Qasaaradii Eibar
( La Liga ) 24 Nof 2018. Eibar ayaa guul ka gaartay Real Madrid kulankii maanta ka dhacay Ipurua, laakiin kooxda Gobolka Basques ma ahan naadiga kaliya ee xiran maaliyada midabka Casaanka iyo Baluuga ee guul ka gaartay xagaagan Los Blancos.
Real Madrid waxaa hore u garaacay CSKA Moscow, Levante, Barcelona iyo haatan oo Eibar ah, dhammaan kooxahaasi waxa ay xirtaan maaliyada Casaanka iyo Buluuga.
Waxa kasta ayaa bilaawday xiligii Julen Lopetegui gaar ahaan bishii October, markaa uu kubbadd halisa uu qalday laacibka Toni Kroos taa uu hogaanka ugu dhiibay kooxdiisa CSKA Moscow xiddiga Nikola Vlasic daqiiqadii laabaad ee kulankii Madrid looga badiyay 1-0.
Maalmo kaddib, Levante ayaa kaga badisay kulan ka dhacay Estadio Santiago Bernabeu 2-1 oo ay kaga mahad celineyso goolasha Jose Luis Morales iyo Roger Marti, siddeed maalin ka hor inta aysan cayaarin dheesha El Clasico.
Maalinkaa waxaa la xukmiyay mustaqbalka macalinkii hore ee Spain cayaartii ka dhacday Camp Nou, taa oo Blaugrana ay ku bahdishay Madrid markii ay kaga badisay 5-1, waxayna horseeday guuldarradaa in la ceriyo maamulihii Lopetegui.
Leyliyaha iminka Santiago Solari, ayaa wajahay Eibar isagoo badiyay afar kulan oo xariira, laakiin kooxda Jose Luis Mendilibar kama aysan xishoon oo waxa ay kaga badiyeen 3-0 iyagoo ka gaaray guushoodii ugu horreysay La liga.
Zlatan Ibrahimovic oo ku dhaw inuu heshiis amaaha ugu Biiro AC Milan
Shaxda Rasmiga ee Kulanka Atletico Madrid v Barcelona